प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै सम्झौता भयो भने आश्चर्य हुँदैन, श्यामानन्द सुमन
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै एउटा विकासप्रेमी पनि त हुनुहुन्छ । त्यसैले, वाम गठबन्धन वा कम्युनिष्ट हुँदैमा के के होला भन्ने मोदीजी ठान्नुहुन्न । उहाँको नारा नै हो नि ‘सब का साथ, सब का विकास’ ।
महिलाहरूको क्षमतामा होइन, अवसरको प्राप्तिमा समस्या छ : सुनिता साह
अहिले महिलालाई समानुपातिक समावेशिता दिनु भनेको उखान जस्तै लाग्छ । आरक्षण किन चाहियो, हामीलाई त प्रत्यक्ष र बराबरीमा चाहिएको हो । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा पनि पुरूषभन्दा महिला नै धेरै हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नयाँ आयाम थपिन्छ : देवेश झा
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी–४ मा वि.सं. २०१९ सालमा जन्मिनुभएका देवेश झा मधेश मामिलाका साथै विदेश मामिलाका जानकारसमेत हुन् । राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु भएका झा २०३९ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सदस्य भई राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका थिए । प्रथम मधेश विद्रोहपश्चात तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा संलग्न भएपछि जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान (तमरा अभियान)को विदेश विभाग प्रमुखको रूपमा सक्रिय रहे । यसपटकको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला उनले मधेश सम्वाद समूह नेपालको गठन गरी मधेशी दलहरूको पक्षमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । परराष्ट्र मामिला जानकारीसमेत रहेका झासँग आसन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ : रामरिझन यादव
मधेशमा मात्र होइन, पहाडमा पनि वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुँदैछ । किनभने यो परम्परागत राजनीतिक प्रणालीबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । जुन राजनीति पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म एकैनासले शासन गरिरहेका छन् ।
एमालेलाई विश्वास गर्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि त छैन : रानी शर्मा तिवारी
कुनै पनि दिन हामीलाई सरकारमा सहभागि गराउनुस् भनेर वार्ता भएको छैन । हामीले सरकारलाई समर्थन गर्दा उहाँहरूले सोध्नुभएको थियो कि तपाईंहरूको शर्त के हो ? हामीले भनेका थियौँ कि हाम्रो एक मात्र सर्त भनेको संंविधान संशोधन हो । त्यो कुरामा मात्र वार्ता भएको हो तर सरकारमा जाने कुरामा कुनै वार्ता भएको छैन ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्दैन : मो.इस्तियाक राई
हामीलाई केन्द्रीय सरकारमा जान जनादेश दिएको छैन । तर, मधेश र उत्पीडितहरूका जुन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गराउनका निम्ति, विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि र हामीले प्रदेश २ मा मात्र सरकार बनाउन सक्यौं । त्यसको समृद्धिका निम्ति पनि ‘गिभ एन्ड टेक’को आधारमा सरकारमा जान्छौं ।
महन्थजीलाई उपराष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव आएको छ : राजीव झा
राजनीति भनेकै सरकारमा जान, देशको विकास गर्नकै लागि हुन्छ । केन्द्रमा पनि हाम्रै बहुमत भइदिएको भए हामी अवश्य पनि सरकार बनाउँथ्यौं । यसले गर्दा कसैले किन सरकार बनायो भन्न मिल्दैन । सरकारमा त जान सकिन्छ, किन नजाने ? तर, संविधान संशोधनको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौं । सबभन्दा पहिला संविधान संशोधन सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयभन्दा संविधान संशोधन मुख्य मुद्दा हो : प्रदीप यादव
मधेशको जनताले हामीलाई दिल खोलेर मत दिएको छ र हामीलाई जिताएको छ । त्यसकारण मधेशको जनताको लागि एकदम गम्भीर रूपमा सोचेका छौँ । किनकी मधेशको जनताले धेरै बलिदानी दिएको छ, धेरै संघर्ष गरेको छ । हाम्रो एक वचनले लाखौँ जनता सडकमा आयो । त्यसकारण हामी जितेर संसदमा आएका छौँ । हामी फोरम र राजपा गरी ३३ जना सांसद रहेका छौँ । त्यो ३३ जना सांसदले मात्रै संविधान संशोधन त हुँदैन ।
संशोधन सुनिश्चित भएपछि नै मधेशी दल सरकारमा जानुपर्छ : दीपेन्द्र झा
राजपा र फोरमले संविधान संशोधन नभइ हामी मान्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा सरकारमा मात्र सहभागी हुने होइन, संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
सर्वसत्तावादको खतरा रोक्न प्रदेश २ मा कांग्रेस विपक्षमा बस्यो : शोभाकर पराजुली
नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्वभाविक हो । महाधिवेशन गरी प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । यसका पनि आफ्नै विधि, प्रक्रियाहरू छन् । नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रियागत रूपमा अगाडी बढ्छ । लोकतान्त्रिक दलमा सधै एउटै मान्छेले नेतृत्व गर्ने भन्ने हुँदैन ।
हाम्रो मुल उद्देश्य भनेको परापूर्व कालदेखि चलिआएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु हो । यसको साथ–साथै दुई देशको महिलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई सुधार गर्नु पनि हो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा जबसम्म महिलाको विकास हुदैन तबसम्म त्यो प्रजातन्त्र सफल हुन सक्दैन ।
हामी विभेद र बहिष्करणमा परेका छौं । संविधानका कुरा जनताले कसरी अनुभूति गर्ने, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि लैजाने, समाजका पछौटेपनलाई कसरी हटाउने लगायतका हाम्रा मुख्य सरोकारका विषय हुन् ।
स्वायत्त प्रदेशका लागि अहिंसावादी आन्दोलन गर्छौं : भाग्यनाथ गुप्ता
मधेश आन्दोलनलाई र समग्र मधेशलाई २ प्रदेशको वकालत गर्दै मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमीत पारे । हाम्रो अभियानको उद्देश्य नै यही हो कि समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको लागि हामी अहिंसावादी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने र झापादेखि बारासम्मको अभियानमा कार्यकर्तामा उत्साह भेटियो । नयाँ वर्ष लागेसँगै हामीले सशक्त रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनेछौँ ।
आयोग प्रमुखले आर्थिक चलखेल गरे : रामप्रवेश बैठा
म पार्टीलाई दोष दिन चाहन्न । किनभने राजपाले मेरो नाम दुई–दुई पटक पठाएकै हो । तर, राजपाका केही नेताहरू छन्, जसका श्रीमती, बाहरवाली पर्नेबाला थियो, उनीहरूले आयोगका प्रमुख डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग आर्थिक चलखेल र लेनदेनको कुरा गरेर मेरो नाम हटाउन लगाइएको हो ।
सुशासन र विकासमा हाम्रो जोड रहन्छ : मो. लालबाबु राउत गद्दी
यो हाम्रो ठाउँ हो, हामी सबैले मिलेर यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । यहाँ सुशासन होस् । हामी यो मुलुककै एउटा अभिन्न अंग हौं, हामीसँग विभेद छैन भन्ने यहाँका जनताहरू महसुस गरोस् ।
वीरगन्ज राजधानी नहुँदा प्रदेश २ धान्न गाह्रो हुन्छ : ओमप्रकाश सरार्फ
‘आर्थिक शोषण र आर्थिक दोहन गर्नका लागि यसलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा अहिलेसम्म परिचय दिँदै आएको हो । तर संवैधानिक रूपमा समग्रमा यो आर्थिक राजधानी हुनैपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभाको औचित्य छैन : महेन्द्र कुमार मिश्र
अहिलेका नेताहरूको अदुरदर्शिता, विवेकहिनता, असमझ, विचार शुन्यता र सैद्धान्तिक विचलनका कारण यस्तो भएको हो । प्रायः यहाँ सबै पार्टीहरूको अवस्था एकै छ । जुन किसिमले राष्ट्रियसभाको अवधारणा आयो, राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी ल्याउने, निर्विरोध निर्वाचित हुने यस्तो अवस्था देख्दा मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रियसभाको औचित्य नै छैन ।
दुर्गानन्द झाको योगदानलाई बिर्सियो भने देशलाई पाप लाग्छ – राजेश्वर नेपाली
आज मुलुकमा जुन गणतन्त्र आएको छ त्यसको मूल श्रेयकार नै दुर्गानन्द झा हुनुहुन्छ । उहाँको योगदानलाई बिर्सियो भने यो देशलाई पापै लाग्छ । आजसम्म जुन राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ, त्यसको मूल कारण नै हो शहीदहरूको योगदान बिर्सिनु हो । शहीदहरूलाई मुलुकले जुन मान सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेको छैन ।
प्रदेश नं. २ जुन समथर भौगोलिक स्थितिमा रहेको छ, त्यसले गर्दा पनि यहाँ सडक विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । यहाँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले यहाँका उद्योगहरूलाई कसरी विकसित गर्ने हो त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
प्रदेश ५ आर्थिक हब बन्नेछ : उमाकान्त झा
यहाँ आर्थिक विकासको सम्भावना राम्रो रहेको छ । यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कृषि, उद्योग, सडक, विद्युत निर्माणसँग सम्बन्धित काम भइरहेको छ । अरू प्रदेशहरूको तुलनामा आर्थिक समृद्धिमा सहज नै देखिन्छ ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध कसैले बिगार्न सक्दैन – चन्दा चौधरी
भारतमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ । भारतले विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ । हामी पनि त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मधेशबिना राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन : विजयप्रसाद मिश्र
पा“च वर्षको अवधिलाई जनताले जुन जनमत दिएका छन् यसमा वाम गठबन्धनको धेरै हाउगुजी भए पनि एमाले र अर्को कुनै मधेश केन्द्रित दल मिलेर सरकार चलाउन सक्ने स्थिति बनेको छ ।
राजपाले यथास्थितिमा वाम गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैन : अनिलकुमार झा
प्रदेश नं. २ मा सरकार बनाउनका लागि गठबन्धन बनाउने वा सहकार्य गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । फोरम र राजपाको नेतृत्वले आवश्यकता महसुस ग¥यो भने सहकार्य हुन सक्छ । मधेशीलाई मधेशबाट आफै भागेर जाने परिस्थिति बनाइँदैछ । यसमा गम्भीर षड्यन्त्र छ । मधेशीमुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्तियाइँदैछ ।
शीतलहर हरेक वर्ष भइरहेको छ । मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । बाढीबाट क्षतिको अवस्था पनि उस्तै छ । अब शीतलहर आयो, मानिस कठ्यांग्रिएर मृत्युको मुखमा पुग्न थालेपछि हड्बडाएर काम गर्ने गरिएको छ । त्यसैले पूर्वतयारी अवाश्यक छ ।
मधेशी दलले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई सत्तामा जाने बाटो बनाए : जयप्रकाश गुप्ता
केही समयपछि मधेशी दलहरूको चरित्र र राज्यको चरित्र जब स्पष्ट हुन्छ त्यसपछि मात्र एउटा संग्लो धारको निर्माण हुन्छ । वाम गठबन्धनको सरकार बने पनि मधेशी दलहरू त्यसमा सहभागी हुनेछन् भन्ने आशय देख्न थालिएको छ । हामी एउटा छलफल प्रारम्भ गर्छौं र त्यसले मधेशमा एउटा नयाँ धारको निर्माण गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा भएका कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ : गिरिशचन्द्र लाल
जनताले चासो दिएनन् भने सरकारले पनि प्रकाशित गर्नेतर्फ ध्यान नदिन सक्छ । टीकापुर घटनाका विषयमा परेका निवेदनहरू पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं ।